FIARA MPANARAKA NY FILOHA NIHARAN-DOZA: 10 no naratra, tsy nisy ny aina nafoy – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:59
Efa nandray andraikitra ny fiadidiana ny Repoblika (Sary Facebook)
Accueil/Politika/FIARA MPANARAKA NY FILOHA NIHARAN-DOZA: 10 no naratra, tsy nisy ny aina nafoy
Niparitaka tamin’ny tambajotra sosialy ny tolakandron’ny omaly ny fisiana fiara “Blindé” iray mpanaradia ny Filoha niharan’ny lozam-pifamoivoizana tetsy Ambatobe. Araka ny fantatra dia nanapaka tampoka ny “cortège présidentiel” ny zaza iray niaraka tamin’ny Ray aman-dReniny ka voatery niala izany ny mpamily, ary niteraka ny loza. Vokany, 10 no isan’ireo naratra, 6 sivily ary 4 miaramila.
Lucien R. 18 octobre 2021
Miisa 10 ireo naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizan’ny Fiara “Blindé – fermeture” na ilay fiara mandeha farany indrindra amin’ny Cortège Présidentielle teny Ambatobe omaly tamin’ny 3ora tolakandro, ka ny 6 amin’izy ireo dia sivily izay ahitana ankizy miisa 5, araky ny fampitan’ny Fiadidian’ny Repoblika. 4 kosa ireo miaramila tao anaty fiara nivadika no naratra. Nandiso ny filazana fa nisy ny aina nafoy kosa ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika. Tsy nisy olona voahitsaky ny fiara ihany koa fa ireo miaramila nitsambikina niala ny fiara hivadika no nahavoadoana tsy nahy ireo ankizy ireo, hoy hatrany ny fanazavana. Ankizy nanapaka tampoka teo alohan’ilay fiara farany mamarana ny cortège no niteraka ny loza. Araka ny fampitam-baovao, nihevitra ilay ankizy fa nifarana ny cortège ka niampita tampoka teo alohan’ilay Fiara fermeture izy. Taitra tampoka nahita ilay tranga ny mpamilin’ilay fiara ka nanitsaka hisatra ary nivadika. Ankoatra ireo ankizy 5 naratra, dia vehivavy 24 taona iray ihany koa no naratra vokatr’izany.
Efa nisy nalefa nody ireo naratra
Ankizy iray amin’ireo 5 ihany koa sokajiana ho maratra mafy ary efa nahazo fitsaboana eny anivon’ny HOMI. Nilaza ny mpitsabo eo anivon’ny Hopitaly fa tsy misy ahiana ireo taova saro-pady amin’ny ain’ilay zaza. Efa nisy tamin’ny marary hafa no nalefa nody rehefa nahazo fitsaboana. Ny 5 kosa dia tsy maintsy anaovana fanaraha-maso ka efa nahazo efitrano ao amin’ny HOMI. Nisy anakiroa ihany koa ny efa nalefa natao scanner dia ilay vehivavy lehibe izay mitaraina marary any amin’ny lamosiny sy ilay akizy iray voadona teo amin’ny lohany. Efa nisy ihany koa ny fandraisana andraikitra nataon’ny Fiadidian’ny Repoblika ka tonga nijery sy nitondra fanampiana ho an’ireo maratra ny Talen’ny Kabinetra sy ny Tale misahana ny Filaminana eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika.
Hatramin’ny harivan’ny omaly, nandiso ny filazana fa nisy aina nafoy ity lozam-pifamoivoizana ity ny teo anivon’ny Fitondram-panjakana, tamin’ny alalan’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. “Vao minitra vitsy izay ny iraka avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika no avy tao amin’ny hopitaly nijery ireo maratra noho ny lozam-pifamoivoizana teny Ambatobe tamin’ireo fiara mpanaraka ny Filoha. Ambara etoana fa tsy misy aina nafoy hatreto ary mahatsiaro tena daholo aloha ireo naratra…tsy azo ekena ny fanelezana tsaho milaza fa nisy aina nafoy hatreto”, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo, omaly.
Fitondrana razana an-tsokosoko : Faty tokony halevina etsy Ambohitrolomahitsy, tany Vohémar vao tratra
Fampanantenan’ny Filoha tao Ihosy : Tonga ny fanampiana ireo Masera miahy ireo sahirana
FAMERENANA IREO VOLAMENA 73Kg: Hohenjehina izay mikasa hanao fanelanelanana